PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-11-04 - 3. NGIZOMTSHELA KANJANI UKUTHI NGI-HIV+?
3. NGIZOMTSHELA KANJANI UKUTHI NGI-HIV+?
UMBUZO: NGABE ngidalelwe isithembu yini? Ngingowesifazane, ngineminyaka ewu-33, angiganile.
Ekuqomeni kwami bengizithola senginomnakwethu futhi ngizwane naye, naye azizwe ejabule ngokubakhona kwami kodwa ngibona engathi le nto iyangilandela noma sengimdala isenzeka, senginokusithokozela isithembu futhi ngizizwa ngikhululekile ngaso.
Ngabe kuyinto elungile le engiyizwayo ngesithembu?
IMPENDULO: KUYANGITHOKOZISA ukuvula ingosi yanamhlanje ngencwadi yakho nkosazane. Ayiqukethe buhlungu nalusizi.
Uzwakala ungumuntu wesifazane ongenaso isikhwele njengoba usho ukuthi uyakwazi ukwemukela abanakwenu osuke unabo esokeni lenu.
Akujwayelekile ukuba umuntu angabi naso isikhwele - ngiyakubongela nje ngenhliziyo onayo ekwazi ukubekezela ngalolu hlobo. Ngicabanga ukuthi unesiphiwo sokwazi ukuhlalisana nabanye abantu ngokuthula.
Futhi uzwakala ungumuntu othobekile nobahloniphayo abanye. Lokhu ngikusho ngoba uthi nabo abanakwenu baye bakuthokozele ukuba khona kwakho.
Dadewethu kufanele wazi ukuthi kubaluleke kakhulu empilweni ukuhlala ukhululekile futhi unokwaneliseka nokujabula ngaphakathi. Abantu bayokubona ukhuluphala nje baze bazibuze ukuthi udlani, kanti ukhuluphaliswa ukukhululeka emoyeni.
Engingakusho kuwe ukuthi uma into ikuthokozisa, yenze. Ungalokhu ubuza kubantu abasemaceleni. Uma isithembu sikuthokozisa, ngena kuso uzihlalele phansi. UMBUZO: NGINENKINGA, ngingowesifazane oneminyaka ewu32. Sinonyaka nezinyanga eziwu-4 nomuntu engithandana naye kodwa angazi ngizomtshela kanjani ukuthi ngihiv+ ngoba uyangethemba usezinhlelweni zokuya ekhaya.
Angisazi esakhe isimo, asize singakhuluma ngesimo sethu. Ngisizeni, ngenzenjani? Ngiyamthanda kodwa ngiyesaba ukumazisa ngoba ngisaba ukuthi uzongishiya, angiziboni ngihlukana naye.